Inona no atao hoe saka feral? | Mariho ny saka
Mandeha eny amin'ny araben'ny tanàna, na tanàna iray aza, misy biby kely mampatahotra miafina ao ambanin'ny fiara, na manodidina ny fitoeram-pako. Azo inoana fa misy olona mankahala azy ireo, ka maniry ny hamarana ny fiainany raha vao misy ny fahafahana.
Izy ireo, ireo saka madinidinika, no tena hadino. Teraka sy notezaina tsy anisan’ny fiaraha-monina izy ireo, fa amin’izao tontolo izao mitovy amintsika. Na inona na inona vintana, dia hisy hanome sakafo azy ireo, saingy tsy hanova ny toe-javatra iainan'izy ireo izany. Raha ny tena izy dia tsy maintsy manohy miaro tena amin'ireo izay maniry hanisy ratsy azy izy ireo.
1 fiainan'ny saka masiaka
1.1 Vondrona sosialy
2 Manao ahoana ny ady amin'ny saka?
2.1 Inona no vokany?
fiainan'ny saka masiaka
Ny orana sy ny hatsiaka no fahavalony roa. Roa hafa. Azon'izy ireo atao ny manonona ny farany ho an'ny marary, ary koa ho an'ny puppies izay tsy mbola mifehy tsara ny hafanan'ny vatany. Ny renin'izy ireo dia hanao izay tsy azo atao mba hiarovana azy ireo amin'ny hafanana ambany, fa ho an'ny saka mipetraka eo amin'ny olona ao an-tanàna dia fanamby isan'andro.
Sahala amintsika, dia biby mafana ra izy ireo. Saingy somary ambony kokoa noho ny an'ny olombelona ny hafanan'ny vatany: manodidina ny 38 degre Celsius. Ny olana dia izay tsy hifehy azy izy ireo raha tsy roa na telo volana aorian’ny nahaterahany, ary na dia izany aza, raha misy fanala dia azo inoana fa tsy hialoha ny taona voalohany izy ireo.
Voalaza fa tena mahaleo tena izy ireofa ny paikadin'izy ireo mivelona eo amin'ny sisin'ny tontolon'ny olombelona dia ny miaina anaty vondrona. Ny vavy no mikarakara ny madinika tsy manalavitra azy, fa ny lahy kosa mivoaka mitety faritra izay heveriny ho faritaniny. Eny tokoa, lasa mavitrika daholo indrindra ny alina, izany hoe rehefa tsy misy tabataba eny an-dalambe ary rehefa mahazo aina kokoa ho azy ireo ny mandeha mitady sakafo ao anaty dabam-pako na… na aiza na aiza ahitany izany.
Rehefa misy saka vaovao ao amin'ny vondrona dia manaraka protocole henjana izy ireo: voalohany, avy amin'ny lavidavitra iray no tazana sy fofona; avy eo, raha mandeha tsara ny zava-drehetra, ny saka vaovao dia afaka miala sasatra eo akaikin'izy ireo, fa mbola mitazona ny halavirana. Rehefa mandeha ny fotoana, ary rehefa mahazo fahatokisana izy ireo, dia hanaiky azy ao amin'ny fianakaviana izy ireo, hamela azy hiara-milalao amin'ny tanora, na hiara-matory amin'izy ireo.
Mazava ho azy fa raha mandeha tsara ny zava-drehetra. Amin'ny toe-javatra sasany, indrindra rehefa lehibe ny saka vaovao ary/na vanim-potoanan'ny fanambadiana, dia lavina amin'ny fitarainana sy ny snorts.. Hiezaka ny hisoroka ny ady izy ireo, fa raha misy ireo antoko voarohirohy ho voarahona dia tsy hisalasala hanafika. Ahoana anefa izany ady izany?
Manao ahoana ny ady amin'ny saka?
Nahita maromaro aho nandritra ny fiainako, ary azoko antoka fa fohy izy ireo amin'ny ankapobeny. Izany dia manome ny fahatsapana fa mahafantatra ny vatany izy ireo, ary afaka manimba be dia be. Porofon'izany ny famantarana avy amin'ny vatana: mibanjina, mioaka mafy sy matotra, volo volo. Ny zava-drehetra dia ao anatin'ny drafitra hiezaka hisorohana ny fifandirana. Raha ny marina, raha tonga amin'ny tongotra izy ireo, izany hoe rehefa mampiasa ny hohony izy ireo dia mifanome, mety ho tehamaina indroa, dia ny 'malemy' dia mandositra ny 'matanjaka', ary ity farany dia manenjika azy. ... na tsia; raha toa ka manaraka azy tokoa izy, dia hiverina amin’ny zavatra iray ihany izy ireo, raha tsy hoe ny ‘malemy kokoa’ dia afaka mandositra ny ‘matanjaka’, na ny ‘mahery kokoa’ nahavita nandroaka azy hiala amin’ny faritaniny.
Raha mbola tapa-kevitra ny hiafaran'ity toe-javatra ity, dia hiezaka hatory isika olombelona, ​​na hanohy ny fanaontsika. Azo inoana fa maro no tsy tia ary manelingelina mihitsy aza ny tabataba ataon'ny saka. Ary mitombina izany: tsy misy olona te ho tapaka amin'ny torimasony na ny asa ataony amin'io fotoana io.
Misy ireo manapa-kevitra ny hitaraina, ary aorian'ny fitarainanao dia hisy fiarabe iray entin'ny olona hisambotra ireo biby ireo ary hitondra azy any amin'ny foibe feno tranom-borona. Cages izay hozarain'izy ireo amin'ny saka am-polony, raha tsy mihoatra.
Ny tahotra sy ny tsy fandriam-pahalemana dia manjaka amin'ny zavaboary sasany izay tsy mahatakatra ny antony nanalana azy ireo tamin'ny fahafahany.Ary kely kokoa rehefa nanao izay nataony nandritra ny an'arivony taona maro izy ireo: arovy izay heveriny fa azy, ary raha tsy voaroaka izy ireo dia miezaha mitady mpiara-miasa. Tena ratsy ve izany?
Ny marina dia toa tsy misy dikany izany. Ny saka masiaka dia matetika, nentina tany amin’ny trano fialofana sy fialofana antsoina hoe fialofana izay, amin'ny toe-javatra tsara indrindra, dia horaisina sy entina any an-trano izay, ho azy ireo, dia tsy inona fa tranom-borona vaovao.
Ny saka iray izay afaka mandeha kilometatra maromaro isan'andro voahidy ao anatin'ny rindrina efatra dia saka manana olana lehibe, tsy ara-batana, fa ara-pihetseham-po.. Mandany ny androny izy miafina ao ambanin’ny farafara na eny an-joron-trano, misisika ny olona te hikarakara azy, ary afaka manafika azy ireo mihitsy aza. Potika ny fanahiny, ny fony, na izay tianao hiantsoana azy.
Ny saka masiaka dia tsy biby afaka miaina ao an-trano, satria tia fahafahana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Inona no atao hoe saka feral?
Aurelio Janiero Vazquez dia hoy izy:
Inona àry no hatao? Toa tsy maha-olombelona ihany koa ny mamela azy ireo eny an-dalambe. Aretina, fiara, olona tsy manara-dalàna… Inona no hatao?
Valiny an'i Aurelio Janeiro Vazquez
Ny saka dia saka mila any ivelany, ohatra, ny tokotany misy fefy dia mety tsara ho azy.
Ny olana dia toy ny mahazatra ihany: ny lapan'ny tanàna, tsy miteny na manao na inona na inona, avelao ny mpilatsaka an-tsitrapo no hikarakara ny zava-drehetra ... ary mazava ho azy, midika izany fa ny efa fantatsika dia ny sakafo, ny veterinera, sns. ireo fandaniana ireo, ny fiheverana ireo olona ireo irery.
Raha tsy mitovy ny toe-javatra, dia naorina eny an-kalamanjana ny trano fialofana, miaraka amin'ny trano keliny sy ny hafa mba hiarovana ny tenany amin'ny hatsiaka sy ny hafanana.
Mbola lavitra anefa ny lalana hodiavina any Espaina.
Ny tranobeko dia manana zaridaina manokana ary misy andiana saka niseho tao, faly ny ankamaroan'ny mpiara-monina satria anisan'ny nikarakara ny voalavo. Nitondra sakafo ho azy ireo mpifanolo-bodirindrina nanana saka ary nisy nametraka mpisotro rano ho azy ireo. Ankoatra izay dia navelan’ireo mpanao zaridaina nivalampatra ihany koa ny dabam-pako izay nampiasainy mba nananany fialofana ary ny tapany ambany amin’ilay trano ihany koa dia misy toeram-pilalaovana sasany nalehany raha avy ny orana. Taorian'ny taona maromaro dia nanomboka nitaraina momba ny saka ny mpifanolo-bodirindrina sasany ary "mistery" dia nanomboka nanjavona izy ireo. Ny tena ratsy indrindra dia ny kisoa eto dia manana laza fa raha tsy mitaky azy ireo ao anatin'ny herinandro dia hovonoina. Ary tsy misy mitaraina amin'izao fotoana izao ireo nitaraina momba ny saka fa misy voalavo indray ... Soa ihany fa nahita ny sasany tamin'izy ireo tany amin'ny zaridaina hafa amin'ny trano manodidina aho ary taorian'ny taona maro dia nisy vondrona maromaro niforona tamin'ny zaridaina samihafa fa ny anay tsy izy ireo intsony. hanitsaka azy mampalahelo ny marina
Raha mahamenatra. Ny ratsy indrindra dia ny hoe, na dia mihamaro aza ny toeram-pialofana sy mpiaro, dia mbola misy toeram-pisakafoanana maro izay ahitan'ny biby amin'ny sokajin-taona rehetra, ny karazana, ny habeny ary ny toe-pahasalamana.
Enga anie hiova tsy ho ela ny toe-draharaha.
Fahadisoana rehefa mitaiza saka ao an-trano